F ०% बजार पतन भएपछि NFT बबल फुट्छ
एनएफटी मार्केट% ०% गिरावट आएको छ, १०२ मिलियन डलरबाट १ .4 ..4 मिलियन डलरमा।
क्राइप्टो आर्ट्स-सम्बन्धित NFTs मेटाटवर्स-सम्बन्धित NFTs द्वारा पराजित गरिएको छ जस्तै डिजिटल रियल ईस्टेट र कलाकृतिहरू गत हप्ताको पाठ्यक्रममा।
NFT हालसालै मुख्य धाराको बजारमा प्रवेश गर्यो धेरै सेलिब्रिटीहरू जस्तै Eminem
र स्नूप डग मार्केटमा रुचि लिन। NFT बजार मे 3rd मा चुचुरो नभएसम्म माग बेमेल थियो। लगभग in १०० मिलियन मूल्यको NFT एकै दिनमा बेचियो। क्राइप्टो संग्रहणीयले कुल बिक्रीमा १०० मिलियन डलर योगदान गर्यो। सात दिन मा बजार चरम वरिपरि, NFT कारोबार मा करीव $ १ million० मिलियन पूरा भयो।
तथापि, NFT क्रेज बितेको जस्तो देखिन्छ sales १ .4। million मिलियन को बिक्री मा मात्र प्रक्रिया गरिएको थियोगत हप्ता। यो लगभग percent ० प्रतिशत को शेयर बजार क्र्यास प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस रकममध्ये $ $ .२ मिलियन क्रिप्टो संग्रहणीय वस्तुहरू गत हप्तामा कारोबार गरिएको थियो जुन बिक्री गरिएको कुल संग्रहणताको आधा हो। यो क्रिप्टो बजारमा भर्खरको स some्घर्षको कारण हो किनकि क्रिप्टो संग्रहणीयले सम्पूर्ण NFT बजारको सफलतामा ठूलो प्रभाव पार्दछ। डेटा अनुसार
, मात्र केहि NFT संग्रहणहरू जस्तै CryptoPunks र हशमास्क लचिलोपन देखाएको छ। यी बजारहरू सात स्थानमा बजारमा सब भन्दा महत्त्वपूर्णको रूपमा देखा पर्‍यो। तिनीहरू व्यापारको कुल खण्डको percent० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ।
साप्ताहिक र दैनिक NFT प्रदर्शन को ब्रेकडाउन
क्रिप्टो आर्ट्स सम्बन्धित NFT हरुको बखत डिजिटल रियल ईस्टेट र कलाकृतिहरू जस्तै vers- सम्बन्धित NFT हटेको छe अन्तिम तथ्या .्कका अनुसार, मेटाभरस एनएफटीले क्रिप्टो आर्ट एनएफटीको बिक्रीमा million million मिलियनको तुलनामा sales 3.3 मिलियन डलरको बिक्री देखायो। खेल NFT व्यापारीहरू गत हप्ता around 3.16 मिलियन को व्यापार।
क्राइप्टो संग्रहणीयहरू मार्केट शिखरको वरपर शीर्ष बिक्री हुने एनएफटीहरू थिए। पछिल्ला days० दिनमा यो 66 66% ले घटेको छ।
खेल चिप्समा लिंक गरिएको NFT कोटी सबैभन्दा लोकप्रिय थियो तर यसको सक्रिय पोर्टफोलियो 55 55% ले घट्यो। केही हप्ता अघि मात्र, दैनिक दैनिक एनएफटी कोटी चुचुरोमा NFT विभागहरू १२,००० भन्दा बढी छ। यद्यपि त्यो संख्या significantly9० सम्म घटेको छ, जुन percent० प्रतिशत कटौतीको नजीक छ।
दैनिक डेटा प्रयोग गरेर, क्रिप्टो संग्रहणीयका लागि प्राथमिक र माध्यमिक बजारहरू हाल NFT बिक्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो इकोसिस्टम हो।
यो l पछि हुन्छखेल को एक कोटी जुन लोकप्रियताको हिसाबले उच्च स्थानमा छ।
डाटाका अनुसार एनएफटी बबल फटिसकेको छ।
स्पेनिश बीबीवाले स्विट्जरल्याण्डमा निजी बैंकि clients ग्राहकहरूको लागि बिटकइन व्यापार सेवा खोल्यो
स्पेनिस बैंकि g कम्पनी बीबीभीएले सोमबार स्विट्जरल्याण्डमा निजी बैंकि clients ग्राहकलाई क्राइप्टोक्रन्सी ट्रेडि and र कस्टडी सेवा उपलब्ध गराउँदैछ। बीबीभीएले शुक्रबार भनेको छ कि छ महिनाको सेवा प्रयोग गरेर चयनित प्रयोगकर्ताहरूको समूहले ब्याबिभले स्विट्जरल्याण्ड ग्राहकलाई ब्यापार उपलब्ध गराएको छ। । यद्य...
जबरजस्ती श्रम सामान रोक्नको लागि तरिकाहरू पत्ता लगाउन ब्लकचेन जाँच गर्दछ, अष्ट्रेलियाली कमिटीले भन्यो
2021-06-19 16:40:08 | Blockchain
अष्ट्रेलियाली सेनेट कमिटीले सरकारले जबरजस्ती श्रम सामानको आयात रोक्न मद्दत गर्न ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको छ। सेनेटको विदेश मामिला, रक्षा तथा व्यापार समितिको प्रतिवेदनले बिहीबार देशको भन्सार बिलको ध्यान परिष्कृत गर्न धेरै सिफारिस गरेको छ। समिति, जुन अष्ट्रेलियाको भन्सार संशोधन ...
समाचार समाचार ईतिहासको एक टुक्रा आफ्नो स्वामित्वमा राख्न चाहानुहुन्छ? त्यहाँ को लागी एक nft छ
2021-06-19 16:38:38 | Blockchain
CNN गैर-फन्जीबल टोकन (NFT) बजारमा प्रवेश गर्दैछ। यस महिना पछि, मिडिया जायन्टले "VNT by CNN" को प्रक्षेपण गर्नेछ, NFT संग्रहले फ्लो blockchain मा केबल समाचार नेटवर्कको -१ बर्षको ईतिहासको क्षणहरू प्रस्तुत गर्ने संग्रहमा सिर्जना गरेको थियो। सीएनएनले ती पलोंलाई निर्दिष्ट गरेन। सही रिपोर्टले यसमा समावेश ...
बदमाश लेजर प्रयोगकर्ताहरूलाई नक्कली हार्डवेयर वालेटहरू पठाउँदछ
2021-06-19 16:31:23 | Blockchain
हार्डवेयर वालेट फर्म लेजरको २०२० डाटा उल्ल . ्घनले बिभिन्न मोड लिएको छ, बदमाशहरूले नक्कली हार्डवेयर वालेटहरू मानिसहरूलाई पठाएका थिए जसको डाटा तेस्रो-पार्टी डाटा उल्लंघनको माध्यमबाट संकलन गरिएको थियो। यी नक्कली वालेटहरूमा प्रयोगकर्ताको क्रिप्टो चोरी गर्न डिजाइन गरिएको हार्डवेयर हुन्छ र घोटाला महत्वाक...
बजार खाम: बिटकिन F 40,000 फेड चिन्ता भन्दा कम संघर्ष गर्दछ
2021-06-19 16:26:05 | Blockchain
२०२23 को अन्तमा ब्याज दर बढाउन सक्ने अमेरिकी फेडरल रिजर्भको घोषणाको लगत्तै लगानीकर्ताले अमेरिकी फेडरल रिजर्वको अनावरण गरेपछि बिटकॉइन कम कारोबार भयो। स्टक र क्राइप्टो जस्ता जोखिमपूर्ण सम्पत्ति पनि फेडले आफ्नो खरीद कार्यक्रम बन्धन खारेज गर्न सक्ने चिन्ताको कारण तौलिएको देखिन्छ। अपेक्षित भन्दा पहिले, त...
Gagliardi: कसरी क्रिप्टो सुपर साइकिल अर्को दशक आकार गर्न सक्छ
2021-06-19 16:19:30 | Blockchain
"सुपरसाइकिल" थीसिस बोल्ड तर अस्पष्ट विचार हो कि क्रिप्टो टेक्निकल र बाह्य कारकहरूको शृंखलाका कारण masse en masse को रूपमा अपनाईनेछ। केहीको लागि, तथापि, "सुपरसाइकल" बजार निर्माताहरूका लागि मात्र मार्केटि term टर्म हो। अरूहरूका लागि यो सपना थियो कि बजारहरू मात्र बढ्न सक्दछन् (अर्थात् व्यापारीहरू समर्प...
ईland्गलल्याण्डको बैंक: कुनै पनि ब्रिटिश सीबीडीसी बिटकॉइन भन्दा धेरै दशौं हजारौं हुनेछ
2021-06-19 16:17:13 | Blockchain
बैंक अफ इ England्ग्ल्यान्डका प्रमुख वित्तीय अधिकारीका अनुसार केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्राको (सीबीडीसी) पछाडिको प्रविधि बिटकॉइनको तुलनामा "दशौं हजार गुणा बढी कुशल" हुन सक्छ। फिनटेक सम्मेलनको भविष्य बिहीबार टोम मटनले सहभागीहरूलाई दिए बैंक अफ इ England्ल्यान्डको CBDCs मा हालको स्थितिको सिंहावलोकन। ध...
माइकल केसी: d.c. को डिजिटल डलर छनौट
2021-06-19 16:12:57 | Blockchain
क्रिप्टोकरन्सी टेक्नोलोजीको प्रभावको एक उपाय यो निर्णय निर्माताओं बीच व्याप्त दिमागको बढ्दो हिस्सा हो। डिजिटल डलरमा विगत दुई हप्ताको कression्ग्रेसनल सुनुवाइ विन्दुमा रहेको मामला हो। केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको बारेमा कुरा गर्ने कुनै तरिका छैन क्रिप्टोकरन्सीहरूको आविष्कार द्वारा बढाइएको सन्दर्भला...
टमाटरको असीम अर्थव्यवस्था | डेभिड z मोरिस
2021-06-19 16:10:29 | Blockchain
यो अर्को पागल हप्ता हो, त्यसैले हामी केहि हास्यास्पद कुरामा फर्कौं: टमाटर रोपेर दुई वर्षमा $ $० को $ 9। Million मिलियनमा कसरी बदल्ने भन्ने बारे बिहिवारबाट ट्वीट। यो कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर थाहा पाउन धेरै गाह्रो छ। यो एक किसिमको नौौं आयामी वस्तु हो र मस्तिष्क सडेर बिग्रिएको संस्कृतिको मिक्स गर्दछ र उ...
ब्ल्करोकले आफ्नो अलादिन लगानी ईन्जिनको लागि ब्लकचेन रणनीति चाहान्छ
2021-06-19 16:08:45 | Blockchain
ब्ल्याक रक, विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति प्रबन्धक, आफ्नो पोस्टि portfolio्ग पोर्टफोलियो प्रबन्धन प्रणालीको लागि ब्लकचैन रणनीति विकास गर्न खोजिरहेको छ, एलाडिन, रोजगार पोस्टिंग अनुसार। वरिष्ठ स्तरमा भर्तीले "वैकल्पिक समाधान अन्वेषण गर्न ब्लॉकचेनको विभिन्न प्रोटोकल / प्लेटफार्म-रूपहरू मूल्या assess्क...